के हामी न्यानो वर्षमा लाग्न सक्छौ? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
के हामी न्यानो वर्षमा लाग्न सक्छौ?
त्यहाँ बिभिन्न प्रकारका फरक प्रकारका तापमान लगहरू छन्। जे होस् ती सबै एक समान संकेत गर्दछ, क्षेत्र को डिग्री साना क्षेत्रहरु देखि ठूलो क्षेत्रहरु मा हुन सक्छ, वा छोटो देखि धेरै लामो समय अन्तरालहरु (तापमान औसत)। यस वर्षले फेरि विश्वको सबैभन्दा तातो एउटालाई औंल्यायो, र यो स्पेनमा भएको सबैभन्दा तातो वर्ष पनि हुन सक्छ।
तर यस बर्षमा केहि हुँदैछ जुन यसभन्दा अघि कहिल्यै भएको थिएन, र यो विश्वव्यापी तापक्रमको सब भन्दा चिन्ताको विषय हो। एल Niño घटना भएको छैन। एल निनो बर्षको बखत, समुद्रले वायुमण्डलमा अधिक ताप छोड्दा तिनीहरू न्यानो वर्ष पनि हुने गर्छन। जुन २०१ occurred देखिएको छैन, यो सम्भव छैन कि विश्व तापक्रम २०१ 2017 को तुलनामा औसतमा उच्च हो। तर तिनीहरू ०. .2016 डिग्री सेल्सियस मात्र भिन्न हुन्छन्।
ग्लोबल औसत तापमान (NOAA द्वारा चार्ट)
बर्षको पहिलो months महिनाको बखत २०१ 2017, रेकर्ड भएदेखि प्रत्येक र हरेक महिना सबैभन्दा न्यानो months महिना भित्रमा छ। यो १ 2017 बर्षमा रेकर्ड गरिएको दोस्रो उच्चतम तापमान २०१ having मा आएको छ। यो समय, एल निनो घटना बिना नै यसले यो बनाउँछ, र अहिले सम्मको सबैभन्दा न्यानो वर्ष यो घटनाबिना रेकर्ड गरिएको छ। एल निन्यो पनि भएको भए के हुने थियो होला? सम्भवतः, नयाँ विश्व तापमान रेकर्ड सेट गरिएको थियो।
हामी ग्राफमा देख्न सक्छौं, हामीसँग उत्तरी र दक्षिणी गोलार्धको ग्लोबल तापमान छ। सबैभन्दा फरक पार्ने एउटा उत्तरी गोलार्ध हो। यदि हामीले २००० देखि दर्ता गरिएको औसत तापक्रमलाई हेर्‍यौं भने हामी देख्न सक्छौं कि त्यहाँ एक रिवाउन्ड छ जुन बढ्दै गएको छ र बाटो नै दिइरहेको छैन। यसबाहेक, हालका वर्षहरूमा तापक्रमको गति तीव्र र चिन्ताजनक छ। र त्यो विचार गर्दै यो वर्ष स्पेन को लागी सबै भन्दा तातो तरंगहरु संग भएको छ सन् १ 1975। Since देखि यस वर्ष इबेरियन देश रेकर्ड भएदेखि के सबैभन्दा न्यानो हुन सक्छ भन्ने ठाउँमा गइरहेको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » के हामी न्यानो वर्षमा लाग्न सक्छौ?
मलाई लाग्छ कि हालको समस्या मध्ये एक हो कि त्यो मानिस बिर्सिन्थ्यो कि ऊ एक गतिशील र स्थिर संसारमा रहन्छ र प्राकृतिक रूपमा र समयसँगै प्राकृतिक मौसम परिवर्तनहरू पनि हुन्छन् जुन ग्रहका जीवित प्राणीहरूलाई बिस्तारै यी परिवर्तनहरू अनुकूल गर्न मद्दत गर्दछ। यद्यपि समस्या यो छ कि जब यी परिवर्तनहरू प्राकृतिक सन्तुलनको व्यवस्थापनमा अनुचित कार्यहरूको साथ महत्वपूर्ण हुन्छन्, तिनीहरू यी प्रजातिहरू र प्राकृतिक स्रोतहरूको छोटो पार्ने वा निश्चित बेपत्ता पार्छन्। त्यसैले हामीले यस लेखमा पढेको जानकारी अनुसार हामी ग्लोबल वार्मिंगको प्राकृतिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछौं, यो सम्भव छ कि हामी यस प्राकृतिक परिवर्तनको संक्रमण अवधिमा प्रवेश गरिरहेका छौं।
सुख्खा मौसममा कुहिर र चिसोबाट पानी कसरी लिने